Huawei Kirin 980 प्रस्तुत गर्दछ, यसको सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर | Androidsis
ईडर फेरेनो | | Huawei
यो हप्ता अघि पुष्टि भएको थियो र आज यो एक वास्तविकता भएको छ। Huawei नयाँ उच्च अंत प्रोसेसर किरिन 980 .०, IFA २०१ presented मा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रोसेसरको निर्माणमा चिनियाँ ब्रान्डले आफूलाई सबैभन्दा नवीनको रूपमा स्थापित गरेको छ। केहि यस्तो हुन्छ जुन यस मोडेलको साथ फेरि हुन्छ, विश्वमा पहिलो n एनएम प्रक्रियामा निर्माण हुने।
किरीन 980० ब्रान्डको सर्वश्रेष्ठ प्रोसेसरको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ अहिले सम्म। हुवावेले हामीलाई एक शक्तिशाली प्रोसेसरको साथ छोड्छ, कृत्रिम बुद्धिमताको ठूलो उपस्थिति र त्यसले स्नापड्रैगन प्रोसेसरहरूमा उभिन खोज्छ।
छोटो, हुवावेले फेरि उनीहरूले यस सम्बन्धमा गरिरहेका ठूला कामहरू देखाउँछन्। उनीहरूले हामीलाई धेरै शक्तिशाली प्रोसेसरहरू सहित छोड्दैछन्, जसले निस्सन्देह तिनीहरूको फोनलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्दछ। किरिन परिवारको यो नयाँ सदस्यमा धेरै मुख्य पक्षहरू छन्। हामी तपाईंलाई तल तल बताउँछौं।
1 कृत्रिम बुद्धि
2 7nm र शक्तिमा निर्मित
3 किरीन 980 XNUMX० कहिले आउनेछ?
अपेक्षित रूपमा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किरिin 980 .० मा निर्धारक भूमिका खेल्दछ। चिनियाँ ब्रान्डले यो टेक्नोलोजी यस प्रोसेसरको मुख्य बिन्दुको रूपमा राखेको छ। यसमा ती सबै जडान गरिएका कम्पोनेन्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भूमिका रहेको छ र यसले चिनियाँ निर्माताको भविष्यका योजनाहरूलाई संकेत पनि दिन्छ।
गत वर्षको प्रोसेसरले क्लाउड कम्प्युटि withको साथ एक NPU (न्युरोल प्रोसेसर एकाई) समाहित गर्‍यो, र यस वर्ष उनीहरू एक कदम अगाडी जान चाहन्थे। किनभने हुवावेले यस केसमा डुअल एनपीयू प्रस्तुत गर्दछ। यसको लागि धन्यवाद, यस प्रोसेसरको प्रतिक्रिया गति गुणा छ।
वास्तवमा, गति यस मोडेलको एक शक्ति हो। जस्तो ब्राण्डले भनेको छ, यो नयाँ प्रोसेसरले वस्तुहरू पहिचान गर्दछ स्नैपड्रैगन 845। भन्दा दुई पटक छिटो र A11 जत्तिकै चार पटक छिटो एप्पल बाट यो स्पष्ट पार्दै कि उनीहरूसँग यस सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धाको ईर्ष्या गर्ने धेरै कुरा छैन।
7nm र शक्तिमा निर्मित
हामी सबै तरिकामा एक नवीन प्रोसेसरको सामना गरिरहेका छौं। जस्तो किर्न 980 पहिलो प्रोसेसर हो जसले 7nm टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। यस प्रविधिको बारेमा लामो समयदेखि कुरा गरिसकिएको छ, तर अहिलेसम्म यसमा निर्मित पहिलो मोडल आएको छैन। त्यसैले यो Huawei छ कि यस मामला मा पहिलो हिट।
शक्ति र उर्जा दक्षता अन्य दुई पक्षहरू हुन् जसले यो प्रोसेसर चम्किन्छ। सीपीयू कोर्टेक्स -A c76 कोरबाट बनेको छ, जुन माली-जी 96 graph ग्राफिक्स जीपीयूको साथ छ। यसका साथै हामीसँग त्यसमा एउटा क्याट २१ मोडेम पनि छ। Huawei चाहान्छ कि यो एक शक्तिशाली, कुशल, बुद्धिमान प्रोसेसर हो कि कनेक्टिविटी को सुविधा प्रदान गर्दछ। कंक्रीट कोर कन्फिगरेसन हो:
२ कर्टेक्स- A2z कोर २.76 गीगा हर्जसम्म
२ कर्टेक्स- A4z कोर २.55 गीगा हर्जसम्म
कम्पनीले किरीन 980 .XNUMX को प्रदर्शन र दक्षताका बारे डाटा पनि प्रदान गरेको छ। उनीहरूलाई धन्यबाद छ हामीसँग के आशा गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट विचार छ। यो यो हुनेछ भनेर भनिएको छ किरीन 75 970० भन्दा% 58% बढी शक्तिशाली र यसको पूर्ववर्ती भन्दा% XNUMX% बढी सक्षम। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, गुणवत्ता मा एक ठूलो छलांग।
को परिचय नयाँ छवि प्रोसेसर। यसको लागि धन्यबाद, सम्भावित उच्च स्तरको विवरणहरू सबै प्रकारको परिस्थितिमा उद्धार गर्न सक्षम हुनेछ। गाह्रो प्रकाश अवस्थाहरूमा पनि, जस्तै रातको फोटोग्राफी।
किरीन 980 XNUMX० कहिले आउनेछ?
हालसालैका हप्ताहरूमा यो पत्ता लागेको छ कि Huawei को योजनाहरु यो नयाँ प्रोसेसर पहिले प्रस्तुत गर्ने थियो, यसको नयाँ उच्च-एंड फोनले बजारमा आउनु भन्दा पहिले। किरिन 980 20 use प्रयोग गर्ने पहिलो फोनहरू म्याट २० र मेट २० प्रो हुनेछन्। यी दुई फोनहरू यस बर्षको शरद launchedतुमा सुरूवात हुनेछन्
वास्तवमा, यो पहिले नै निश्चित भइसकेको छ कि त्यहाँ हुनेछ अक्टुबर १ on मा लन्डन शहर मा एक कार्यक्रम यी दुई फोन प्रस्तुत गर्न उच्च-अन्त। र दुबै चिनियाँ ब्रान्डले अहिलेसम्म निर्माण गरेको उत्तम प्रोसेसर द्वारा संचालित हुनेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Huawei » किरीन 980 XNUMX० Huawei को सब भन्दा शक्तिशाली प्रोसेसर अब आधिकारिक छ
एप्पल सेप्टेम्बर १२ मा आईफोन र एप्पल वाचको नयाँ पुस्ता प्रस्तुत गर्दछ